Asa fampihorohoroana tany Syrie 12 no namoy ny ainy tao Alep
Frantsa Niverina nihetsika indray ny « Gilets Jaunes »
Raikitra indray ny sakoroka tao Paris - Frantsa ny sabotsy lasa teo. Niverina nidina an-dalambe indray ny "Gilets Jaunes" raha toa ka niato izany nandritra ireny vanim-potoanan` ny valanaretina Covid 19 tany an-toerana ireny.
Feno 19 taona ny 11 septambra 2001 Kihon-dalan’ny tantaran’izao tontolo izao
Feno 19 taona katroka anio ny raharaha 11 sepambra 2001, asa fampihorohoroana tamin’ny alalan’ny fiaramanidina roa nanapoahana ny trano kambana nijoalajoala na ny World Trade Center
Paris Saint-Gérmain Voan’ny Covid-19 i Neymar, Di Maria, Paredes
Mitondra ny valanaretina Covid-19 i Neymar kintan’ny baolina kitra Brezilianina milalao ao amin’ny Paris Saint-Germain na ny PSG. Nandeha nitsangatsangana tany Ibiza,
Fitaterana anabakabaka 100 miliara dolara no fatiantoka maneran-tany
Nihena 4,6 miliara ny isan` mpandeha fiaramanidina hatramin` ny nisian` ny valanaretina “coronavirus” maneran-tany teo amin` ny seham-pitaterana anabakabaka araka ny tatitra navoakan` ny banky iraisam-pirenena.
Fanonganam-panjakana tany Mali Vita hatreto ny momba ny filoha IBK
Nametra-pialana rehefa tratry ny tsindrin’ireo miaramila mpikomy ny filoha Maliana Ibrahim Boubacar Keita (IBK).
DONALD TRUMP SAMBANY NANAO AROTAVA IMASOM-BAHOAKA
Sambany hatramin’ny nahatafidiran’ny covid-19 tany Etazonia no nanao arotava imasam-bahoaka ny Filoha Amerikanina Donald Trump omaly alahady raha nitsidika ny Hopotalin’ny miaramila tao Washington.
Fodiana an-tanindrazana Miantso vonjy ny tatsambo Malagasy
Miezaka hampifandrindra hatrany ny fifehezana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus sy ny fitsinjovana vahoaka ny fitondrana hatramin’ny nidirana tamin’ny hamehana ara-pahasalamana.
Hatreto, miisa 12 no namoy ny ainy ary 15 no naratra mafy nandritra ny asa fampihorohorona nitranga tany Al Wadihi Alep, any Syrie, ny alahady alina hifoha alatsinainy teo.
Ahiana ny mety mbola hitomboan’ireo maty satria maro amin’izy ireo no mbola miady amin’ny fahafatesana. Vatan-dehilahy maromaro nitam-piadiana mahery vaika no tonga tao Alep ka nitoraka baomba sy nitifitra ny tanàna tao amin’ny tanàna kelin’i Al Wadihi. Miteraka fahasimbana goavana ho an'ireo sivily toy ny toeram-ponenana sy ny trano fitsaboana ary tsena maromaro ilay fanafihana. Misy ny famindrana toerana ireo mponina ao amin`ity tanàna ity ataon’ny fanjakana amin’izao fotoana izao.